Inhalation - omunye zokuvimbela esebenza kahle kakhulu ekwelapheni izifo zokuphefumula. Kuyinto ikakhulukazi izingane ezincane, ngoba kunzima ukunikeza imithi, futhi ephefumula ka evala kuletha impumuzo enkulu kusukela emphinjeni kanye namathansela. Kunezindlela eziningi ezahlukene ukuze ephefumula ekhaya. I elula kakhulu futhi konke inqubo eyaziwa - ahlale, embozwe ithawula, phezu epanini amazambane ashisayo abilisiwe, chamomile noma zikagamthilini umhluzi. Kodwa namuhla, cishe njalo yesimanje imithi umndeni iKhabhinethi kuyinto Inhaler akhona iqoqo fillers ezahlukene: ezivamile menthol izimali nesiphetho emulsion antibiotikosoderzhaschey.
Hlanganisa i ephefumula (Nebulizer) ukusebenza ngo cishe zonke ekhemisi, into esemqoka - ukukhetha isimo esifanele. Kungcono uthintane onguchwepheshe. Ikakhulukazi akudingekile ukuzithiba medicate, uma kuziwa impilo yengane.
ephefumula we nebulizer
Muva nje, eziningi imikhiqizo emisha, futhi ngokuvamile kunzima ukukhetha izidakamizwa ngempumelelo. Osokhemisi sithenjiswe ingxube ephefumula ehlanganisa ebalulekile amafutha, menthol futhi zikagamthilini. Ungakwazi pick up ukwakheka ephelele i inhaler, futhi abaphathi ngomlomo. Kumele ezithwalwa komzimba, okungase kubangelwe yezingxenye ezibalulekile, hypersensitivity umgudu engenhla kanye nobudala lesiguli. Inhalation we nebulizer is hhayi Kunconywa izingane ezingaphansi kweminyaka 2 ubudala, ngenxa yokuthi kulesi sikhathi we mucosa acinene nomlomo kuyinto amafutha ibuthaka futhi kubalulekile kanye namakhambi kungabangela ukusha.
Indlela ukusetshenziswa kwalezi izindlela ezinzima elula: 10-20 lehla ukuxubana ephefumula kufanele buhlanjululwe in 200 ml amanzi afudumele bese uhogela izikhathi 2-4 ngosuku imizuzu 10-15. Ngokuvamile, iziguli zizizwe ngemva kokugadla amaseshini ezimbalwa kuphela. ingxube imuncwe kungcono agcinwe endaweni epholile, ezomile, endaweni emnyama, njengoba kubalulekile amafutha photosensitivity.
At supercooling abandayo futhi kuyinto efiselekayo ukusebenzisa zikagamthilini Romashkovo-ukuxubana ephefumula. It kuzovula le sinuses, ukuthambisa mucosa, khulula zokuzikhukhumeza amalaka. Chamomile - enhle kakhulu ejenti elwa namagciwane elisetshenziswa kwemithi has isikhathi eside.
In izifo ezimbi nakakhulu ezifana nenyumoniya, namathansela, pharyngitis, futhi ukucinana kwemigudu yokuphefumula, ukusebenzisa kangcono Salvia officinalis, okuyinto has umsebenzi elwa namagciwane. Lesi sitshalo hhayi kuphela aqede imiphumela asalile, kodwa futhi ephatha ngqo iphinde ivimbele ukuxakeka. On amagciwane amelana ne-penicillin (isib Staphylococcus futhi streptococcus) izenzo kakhulu ingxube ephefumula, okuhlanganisa wort iSt John sika. Lesi simila ingenye izithako esiyinhloko isifutho eziningi, njengoba kuvumela ukususa ukuvuvukala elingenhla ipheshana zokuphefumula.
Calendulakuva Yarrow usizo nge angina futhi umkhuhlane, kodwa inhlanganisela licorice, wasukuma uLwandle Lukasawoti ephatha izifo fungal emlonyeni, isifo kwamazinyo. Inhalation kulezi zingxenye kumele kwenziwe izikhathi 3-4 ngosuku imizuzu 10-15. odokotela Parallel ukuncoma ukubambelela mouthrinse ingxube esikweyoku futhi kwesihlahla se-okhi amagxolo.
ingxube yokuvula amakhala ngoba ephefumula
Mayelana uLwandle Lukasawoti, ecebile i-iodine kanye sodium, ukukhuluma ngokwehlukana. Ngo rhinitis okwathatha isikhathi eside kangako ungakwazi azame ukudonsa ekhaleni isixazululo unconcentrated we ketshezi. Ukuvuvukala sinuses ngokuphawulekayo abohle. Futhi, lezi izinqubo phansi ukuze nezilwanyana ezincane ezihlukahlukene.
Kuyaphawuleka ingxube ephefumula, okuhlanganisa i kula amaqabunga zikagamthilini - chlorophyll. Lokhu decoction uwoyela isetshenziswa ukulwa staph ukutheleleka. Inqubo okufanele kwenziwe njalo ngemva kwamahora 3 amaminithi awu 5. Ekupheleni ephefumula Kunconywa ukususa ukumnika emphinjeni esikweyoku futhi chamomile.
Susa ukuvuvukala kule paranasal sinuses uyakwazi uhlanganise i ephefumula lwebhece, ziyadliwa leaf, horsetail futhi Yarrow. Lezi zitshalo akhulule ukoma nokuvuvukala, ikakhulukazi ukusiza ukudambisa isimo lesiguli kuyinto ephefumula enjalo ngaphambi sokulala.
Ngemva namathansela kanye ukucinana kwemigudu yokuphefumula ngokuvamile baphawula yokujama tsi ka phlegm, okubangela ezomile, ukukhwehlela okubuhlungu. Lokhu kunjalo ikakhulukazi isikhwehlela viscous ngokuthi izingane ezincane, ngoba abakwazi ukukhwehlela bebodwa. Lapho wonke amanxusa ihlolwe, futhi musa nemiphumela ebesiyilindele kufanele azame inhlanganisela Thyme kanye anise (owodwa isipuni ngamunye 200 ml amanzi) kanye ether uwoyela anise. Marshmallow impande siyingxenye ye ukuncelisa iqoqo nezinye Izingxube eziningi, ngenxa wesenzo elwa namagciwane.
Ingxube ngoba ephefumula: indlela usebenzisa
Zonke izingxenye alethwe Bilisa 200 ml amanzi imuncwe izikhathi 4-5 ngosuku imizuzu 10. Ngemva ephefumula kufanele umqulu kahle, kungcono ukugqoka ekhanda lakho isikhafu efudumele noma isigqoko.
Kungcono ukuqoqa e nekhabethe lemithi umndeni ethile izitshalo ezibalwe ngenhla kanye amafutha abalulekile, khona-ke ungakwazi ukusiza abathandekayo bakho ngendlela esifike ngesikhathi.
Umuthi 'INH. imfundo
"Tsetirinaks": yokusetshenziswa, ngempela
"Komfoderm": yokusetshenziswa, incazelo, ukwakheka, analogs kanye nokubuyekeza
Ngayiphi ngonyaka wathengiswa Alaska eMelika? umlando Alaska
Zezindiza amasu Russian. Ukulwa Amandla zezindiza Russian
Minerals Finland. Industry and Economics e Finland
Haircut sikelo ashisayo - ekwelapheni izinwele ezilimele.
Bouquet amaswidi: isigaba master Wabasaqalayo
Striploin hook iphethini: umdwebo lithathelwe ngokukhethekile
Yeka ukufakwa kokumqoka kuphela ukukhetha: "Makita" AEG noma "Bosch"? Isikudilayiva AEG: Izibuyekezo
The best mkhuba inkomba. Kuyini kushintsha inkomba mkhuba?
Okwesikhashana TMP-ifayela: lokho oyikho nalokho ukuvula?